ဗမာပြည်အား သွေးချောင်စီးစေချင်သူ ရခိုင်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် တိ-ကု အေးမောင် | Ko Rohingya
This entry was posted on February 8, 2013, in ဖဘတင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများ and tagged ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, ရခိုင်, ရခိုင်အကြမ်းဖက်ပါတီ, ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း, ဒေါက်တာအေးမောင်, RNDP ပါတီ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကျမ ဘယ်တော့မှ ကုလားလို့ မခေါ်ဘူး။	NLD နဲ့ ရိုဟင်ဂျာ →